Sida Google u isticmaasho sirdoonka macmal gudaha Google Search | BehMaster
Bogga ugu weyn/Seo/Sida Google uu u isticmaalo garaadka macmalka ah ee Google Search
Sida Google uu u isticmaalo garaadka macmalka ah ee Google Search
Maaddaama Google ay sii waddo in ay ka faa'iidaysato garaadka macmalka ah iyo barashada mashiinka Google Search, waxaa laga yaabaa in la is weydiiyo siyaabaha AI iyo barashada mashiinka ay uga caawiyaan Google Search in ay qabato hawlaheeda maalinlaha ah. Laga soo bilaabo 2015, markii Google uu soo bandhigay AI-kiisii ​​​​ugu horreeyay ee raadinta ee lagu magacaabo RankBrain, Google wuxuu sii waday inuu geeyo nidaamyada AI si uu si fiican u fahmo luqadda oo uu sidaas u wanaajiyo natiijooyinka raadinta Google u soo bandhigo raadinta.
Dhowr bilood ka hor waxaan Google u dirnay su'aalo dhowr ah oo ku saabsan sida Google uu u isticmaalo AI raadinta, oo ay ku jiraan RankBrain, neural matching, BERT iyo Google horumarkii AI ee ugu dambeeyay - MUM. Waxaan la nimid faham badan oo ku saabsan marka Google uu isticmaalo AI, kaas oo AI uu sameeyo waxa ku jira Google Search, sida algorithms-yada kala duwan ee AI ay u wada shaqeyn karaan, sida ay isu beddeleen sannadihii la soo dhaafay iyo waxa, haddii ay jiraan, suuqgeynayaasha raadinta waxay u baahan yihiin ogow marka ay timaado sida Google u isticmaalo AI raadinta.
Waxaan la hadalnay Danny Sullivan, Xiriiriyaha Dadweynaha ee Raadinta Google, si uu uga caawiyo jawaabaha su'aalahan badankooda. Marka la soo koobo, RankBrain, is-waafajinta neerfaha iyo BERT ayaa lagu isticmaalaa nidaamka qiimaynta Google ee qaar badan, haddaysan ahayn inta badan, weydiimaha oo eeg fahamka luqadda weydiinta iyo nuxurka ay ku jirto labadaba. Si kastaba ha ahaatee, MUM hadda looma isticmaalo ujeedooyinka kala saraynta, hadda waxa kaliya loo isticmaalaa magacaabista tallaalka COVID waxayna awood u siisaa mawduucyada la xidhiidha natiijooyinka fiidyowga.
Waxay ku bilaabataa qoraal u qorida tusmada aadanaha
Waxaad mar walba ka maqashaa wakiillada Google-ka iyo SEO-yo badan: u qor nuxurka aadanaha. Waagii hore ee SEO, marka algorithms-yada laga yaabo inay fudud yihiin, waxaad lahaan lahayd SEO-yo badan oo u farsamayn lahaa wax kasta oo search engine ah (ka dibna waxaa jiray daraasiin matoorada raadinta kala duwan). Hadda, waxaa jira ugu horreyn Google, oo leh wax yar oo Bing ah iyo qaar ka mid ah ruffing ka DuckDuckGo - laakiin algorithms-yadu aad ayey uga sii adag yihiin oo leh barashada mashiinka iyo AI, algorithms waxay fahmeen luqadda sida bini'aadamku u fahmi lahaa luqadda.
Markaa talada Google siisay waxay u qortaa aadanaha, iyo inaadan u hagaajin karin goobtaada BERT ama AI kasta. Haddii aad qorto waxyaabo ay dadku fahmaan, markaa algorithms-yada iyo makiinadaha raadinta AI ayaa sidoo kale fahmi doona. Marka la soo koobo, maqaalkani maaha mid loogu talagalay inuu isku dayo inuu ku siiyo talooyin SEO ah oo ku saabsan sida loo hagaajiyo boggagaaga AI gaar ah, laakiin halkii aad ka sheegi lahayd sida Google u isticmaalo AI ee Google Search.
Dulmarka AI ee lagu isticmaalo Google Search
RankBrain. Waxay ku bilaabataa RankBrain, isku daygii ugu horreeyay ee Google ee adeegsiga AI ee raadinta taariikhda ilaa 2015. Google wuxuu noo sheegay RankBrain wuxuu ka caawiyaa Google inuu fahmo sida ereyadu ula xiriiraan fikradaha waxayna qaadan karaan weydiimo ballaaran oo si fiican u qeexaan sida weydiintaasi ula xiriirto fikradaha dhabta ah ee adduunka. Iyadoo la bilaabay 2015 oo loo adeegsaday 15% weydiimaha, Google wuxuu sheegay in hadda, 2022, si weyn loogu isticmaalo su'aalo badan iyo dhammaan luqadaha iyo gobollada. RankBrain wuxuu si gaar ah u caawiyaa Google darajo raadinta natiijooyinka waana qayb ka mid ah qiimaynta algorithm.
Sanadka la soo saaray: 2015
Loo Isticmaalay Qiimaynta: Haa
Waxay eegaysaa weydiinta iyo luqadda nuxurka
Wuxuu u shaqeeyaa dhammaan luqadaha
Aad loo isticmaalo su'aalo badan
Halkan waxaa ah tusaale ay Google siisay sida RankBrain loo isticmaalo, haddii aad raadiso "waa maxay magaca macaamilka ee heerka ugu sarreeya ee silsiladda cuntada," nidaamyada Google waxay wax ka bartaan inay erayadaas bogag kala duwan ku arkaan fikradda cunnada. Silsiladda waxaa laga yaabaa inay xiriir la leedahay xayawaanka, oo aan ahayn isticmaalayaasha aadanaha. Fahamka iyo is waafajinta ereyadan fikradahooda la xidhiidha, RankBrain waxay ka caawisaa Google inuu fahmo inaad raadinayso waxa inta badan loogu yeero "ugaadha sare."
Isbarbardhigga neerfaha. Isku-dhafka neerfaha ayaa ahaa AI Google-ka soo socda ee loo sii daayo raadinta, waxaa la sii daayay 2018 ka dibna lagu ballaariyay natiijooyinka raadinta maxalliga ah ee 2019. Xaqiiqdii, waxaan haynaa maqaal sharaxaya farqiga u dhexeeya RankBrain iyo is-waafajinta neural halkan. Google wuxuu noo sheegay isbarbardhigga neerfaha waxay ka caawisaa Google inuu fahmo sida weydiimaha ula xiriiraan boggaga adoo eegaya dhammaan su'aalaha ama waxa ku jira bogga oo fahamsan macnaha guud ee boggaas ama weydiinta. Maanta, is-waafajinta neerfaha ayaa loo adeegsadaa qaar badan, haddaysan ahayn inta badan, weydiimaha, dhammaan luqadaha, gobollada oo dhan, inta badan ee toosan ee raadinta. Isbarbardhigga neerfayaasha ayaa si gaar ah u caawiya Google darajo raadinta natiijooyinka waana qayb ka mid ah qiimeynta algorithm.
Sanadka la soo saaray: 2018
Halkan waxaa ah tusaale ay Google bixisay oo ku saabsan sida is-waafajinta neerfaha loo isticmaalo, haddii aad raadiso "faham sida loo maareeyo cagaar," tusaale ahaan. Google wuxuu yiri "haddii saaxiib ku weydiiyo kan, waxay u badan tahay in lagu turunturoodo." "Laakin isbarbardhigga neerfaha, waxaan awoodnaa inaan macno samayno raadintan su'aalaha leh. Adoo eegaya matalaadda ballaadhan ee fikradaha su'aasha - maamulka, hoggaanka, shakhsiyadda iyo wax ka badan - is-waafajinta neerfaha waxay qeexi kartaa in raadiyahani uu raadinayo talooyinka maaraynta ee ku salaysan caan ah, hagaha shakhsi ahaaneed ee midabka ku salaysan, "Google ayaa noo sheegay.
BERT. BERT, matalayaasha Encoder-ka laba jiho ee ka yimid Transformers, ayaa yimid 2019, waa farsamo ku salaysan shabakada neural ee habaynta luuqada dabiiciga ah ee tababarka hore. Google waxa uu noo sheegay BERT in ay Google ka caawiso in ay fahmaan sida isu geynta kelmadaha u muujiyaan macnayaal kala duwan iyo ujeeddooyin kala duwan, oo ay ku jirto in la eego isku xigxiga erayada bogga, sidaas awgeed xataa erayada aan muhiimka ahayn ee ku jira weydiimahaaga ayaa loo tiriyaa. Markii BERT la bilaabay, waxaa loo adeegsaday 10% dhammaan weydiimaha Ingiriisiga laakiin waxaa lagu ballaariyay luqado badan waxaana loo adeegsaday ku dhawaad ​​dhammaan weydiimaha Ingiriisiga goor hore. Maanta waxa loo adeegsadaa inta badan weydiimaha waxaana lagu taageeraa dhammaan luqadaha. BERT waxay si gaar ah u caawisaa Google darajo raadinta natiijooyinka waana qayb ka mid ah qiimaynta algorithm.
Sanadka la soo saaray: 2019
Waxay u shaqeysaa dhammaan luqadaha, laakiin Google wuxuu yiri BERT "wuxuu ka ciyaaraa door muhiim ah ku dhawaad ​​​​wax kasta oo Ingiriis ah"
Halkan waxaa ah tusaale ay Google bixisay oo ku saabsan sida BERT loo isticmaalo, haddii aad raadiso "haddii aad raadiso "dawo ma u heli kartaa qof farmashi ah," BERT waxay naga caawinaysaa inaan fahanno inaad isku dayayso inaad ogaato inaad dawo soo qaadan karto iyo in kale. qof kale. BERT ka hor, waxaan u qaadanay hordhacaas gaaban si run ah, badina natiijooyin soo ifbaxaya oo ku saabsan sida loo buuxiyo warqadda daawada," Google ayaa noo sheegay.
HOOYO MUM, Qaababka Midaysan ee Hawl-fulinta badan, waa Google-kii ugu dambeeyay ee raadinta. MUM waxaa la soo bandhigay 2021 ka dibna la balaariyay mar labaad dhamaadka 2021 codsiyo badan, iyada oo waxyaabo badan oo rajo leh loo adeegsan doono mustaqbalka. Google waxa ay noo sheegtay in MUM ay Google ka caawiso ma aha oo kaliya fahamka luuqadaha balse sidoo kale curinta luuqadaha, si loo fahmo kala duwanaanshaha ereyada iyo luqadaha cusub. MUM looma isticmaalo ujeedooyin darajo hadda gudaha Google Search laakiin waxay taageertaa dhammaan luqadaha iyo gobollada.
Sanadka la soo saaray: 2021
Loo Isticmaalay Qiimaynta: Maya
Ma aha weydiin ama luqado gaar ah
Waxay u shaqeysaa dhammaan luqadaha laakiin Google looma isticmaalin ujeeddooyin kala sarreynta maanta
Loo isticmaalo ujeeddooyin xaddidan
Waqtigan xaadirka ah, MUM waxa loo isticmaalaa in lagu horumariyo raadinta macluumaadka tallaalka COVID-19, Google-na waxa ay sheegtay in ay “rajaynayso in ay bixiso habab badan oo dareen leh oo wax lagu baadho iyada oo la adeegsanayo isku-darka qoraalka iyo sawirada labadaba Google Lens bilaha soo socda.”
AI si wadajir ah ayaa loo isticmaalay raadinta laakiin waxaa laga yaabaa inay ku takhasusaan goob raadinta
Danny Sullivan oo ka socda Google ayaa sidoo kale sharaxay in kuwani ay yihiin algorithms-ku-saleysan AI, waxay inta badan ka wada shaqeeyaan inay ka caawiyaan qiimeynta iyo fahamka isla weydiinta.
Google wuxuu noo sheegay in dhammaan nidaamyadan AI "loo isticmaalo si loo fahmo luqadda oo ay ku jiraan su'aalaha iyo natiijooyinka suurtagalka ah ee khuseeya," isagoo raaciyay "looma qorsheynin inay u dhaqmaan si gooni ah si ay u falanqeeyaan kaliya weydii ama bog." Markii hore, waxaa laga yaabaa in loo maleeyay oo la fahmay in hal nidaam AI laga yaabo inuu si aad ah u eegay fahamka weydiinta oo aan ahayn waxa ku jira bogga, laakiin taasi maahan kiiska, ugu yaraan maaha 2022.
Google waxa kale oo ay xaqiijisay in sanadka 2022 RankBrain, iswaafajinta neerfaha, iyo BERT si caalami ah loo isticmaalo, dhammaan luqadaha Google Search ay ku shaqeyso.
Markay timaaddo raadinta mareegaha oo ka soo horjeeda raadinta maxalliga ah iyo sawirrada, wax iibsiga iyo meelo kale, Google wuxuu sharraxay in RankBrain, is-waafajinta neerfaha, iyo BERT loo isticmaalo raadinta shabakadda. Qaababka kale ama meelaha toosan ee Google Search sida sawirada ama qaabka wax iibsiga waxay isticmaalaan hababka AI ee gaarka ah, sida uu qabo Google.
Ka warran cusbooneysiinta asaasiga ah iyo AI
Sida kor lagu sharaxay, Google ayaa isticmaala RankBrain, isbarbardhigga neerfaha, iyo BERT inta badan weydiimaha aad geliso Google Search, laakiin Google sidoo kale waxa uu leeyahay updates aasaasiga ah. Cusboonaysiinta Google-ka ee ballaaran ee Google-ku soo rogo dhowr jeer sannadkii ayaa inta badan ay ogaadaan milkiilayaasha goobta, daabacayaasha, iyo SEO-yada in ka badan marka Google uu sii daayo nidaamyadan AI ee waaweyn.
Laakiin Google waxa uu sheegay in kuwan oo dhan ay wada shaqayn karaan, oo ay la socdaan cusboonaysiinta asaasiga ah. Google wuxuu yiri saddexdan, RankBrain, isbarbardhigga neerfaha, iyo BERT waa nidaamyada AI ee waaweyn ee ay leeyihiin. Laakiin waxay leeyihiin habab badan oo AI ah oo ku jira raadinta iyo qaar ka mid ah cusboonaysiinta asaasiga ah ee Google soo saartay.
Google ayaa noo sheegay in ay ku leeyihiin Google Search nidaamyada kale ee barashada mashiinka. "RankBrain, iswaafajinta neerfaha, iyo BERT waa qaar ka mid ah hababkayada kuwa ugu awooda badan oo caan ah," Google ayaa yidhi. Google ayaa intaa ku dartay, "waxaa jira walxo kale oo AI ah oo saameyn kara cusboonaysiinta asaasiga ah ee aan khusayn saddexda hab ee AI ee gaarka ah."
Aaladaha Keyword SEO ee aan ugu Jeclahay
Instgram-ku waxa uu soo bandhigayaa Sheekooyinka Highlights to feature Reels